Story | Online Sahitya
Nepali Story कथा
भैगो दिनुपर्दैन / मनु ब्राजाकी
Read more about भैगो दिनुपर्दैन / मनु ब्राजाकी
पछ्यौटे अग्रगमन / मनु ब्राजाकी
गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको थाप्लोमाथि पुरानो साबिक सूर्य उदायो ।
वाग्मती भनिने ढलमतीको एउटा किनारमा पौराणिक भए पनि उत्तरआधुनिक देब्रे ढल्किएको शिवलिङ्ग पूजा प्राप्त गर्न ठडिएको छ ।
साबिक सूर्यको धूमिल गुलाफी प्रकाशमा कतैबाट एउटा भुस्याहा र लुत्याहा कुकुर प्रकट हुन्छ ।
अनि, त्यस पौराणिक कम, उत्तरआधुनिक बाङ्गो शिवलिङ्गमाथि आफ्नो र आफ्ना गणको क्षेत्र निर्धारण गर्न बलैसँग एक मानोजति मूत्राभिषेक गर्छ । लुतोग्रस्त स्वानको स्वानमूत्रले त्यस बाङ्गो शिवलिङ्गको योनिसदृश्य खोबिल्टे भाग मूत्रमय हुन्छ ।
Read more about पछ्यौटे अग्रगमन / मनु ब्राजाकी
मिस रश्मी / झलक सुवेदी
आदरणीय सन्तोष सर,
मजस्ती धोका दिएर हिँडेकी स्त्रीले ‘आदरणीय’ शब्द प्रयोग गरेकोमा तपाईंंलाई आश्चर्य लागेपनि म तपाईंंलाई आदरणीय नै मान्छु । मैले तपाईंंबाटै जीवनका मूल्य र स्वतन्त्रताको शक्तिको ज्ञान प्राप्त गरेकी हु“ । सायद तपाईंंस“ग भेट नभएको भए, तपाईंंस“ग त्यति वर्ष सहधर्मिणीका रुपमा नबिताएको भए म आज ‘म’ हुन वा अहिलेको ठाउ“मा आउन सक्दिनथें । म कतै कुनै तपाईंं वा तपाईंंजस्तै पुरुषको बिस्ताराको निष्क्रिय सहभागी वा दुई–चार थान बच्चाकी आमाका रुपमा सीमित हुन्थें । त्यसैले आज म जे छु, त्यसका लागि म तपाईंंप्रति ऋणी छु ।
Read more about मिस रश्मी / झलक सुवेदी
मृत्यु ः अस्ति, हिजो र आज / आन्विका गिरी
Read more about मृत्यु ः अस्ति, हिजो र आज / आन्विका गिरी
रातो पासपोर्ट / डा. राजेन्द्र विमल
गजफै भयो ! दुई थान सक्कली सांसद्ज्यूहरू र दुई थान नक्कली सांसद्ज्यूहरूलाई खोरको शोभा यसरी बनाइयो, जसरी तामाभित्र हीरा हालेर बाँडाले औँठीको शोभा बढाइदिन्छ । राष्ट्रिय कारागारको चर्चित 'आइटम' बन्न पाउनु उहाँहरूका लागि जातीय गौरवको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । जिन्दगीको एकएक छिन पनि मज्जाले काट्न साईबाबाको कृपा चाहिने हामी भोकानाङ्गा नेपालीहरूका लागि तात्तातो पाकमा झुरुमझुरुम गरी तयार पारिएका वफाउँदो जेरीजस्तो स्वादिलो ताजा समाचार हो ।
Read more about रातो पासपोर्ट / डा. राजेन्द्र विमल
Read more about रुपान्तरण / आन्विका गिरी
उसले धेरै युगहरू बाँचिसकेकी थिई। सृष्टिभर कति युग आउँछ, ती युगभरि उसको आयु पक्का थियो। हरेक समयमा बाँच्थी तर उसको नाम कुनै खास समयसँग मात्र तादात्म्यता राख्दैन थियो। समयको अवधिलाई आफूभित्र कैद गर्ने युगसँग सापेक्ष थियो उसको नाम अर्थात् युगनायिका।
Read more about युगनायिका
अवशेष वस्ती/ किशोर पहाडी
पूरावस्ती चारैतिर अस्तव्यस्त भएर थुप्रिएको थियो । नीलो हाफ ज्याकेट लगाएका केही मान्छेहरू त्यो अवशेष वस्तीम छिरेका थिए । चारैतिर शून्यता थियो कोलाहल पूर्ण भूकम्पपछिको शून्यता ।
नीलो ज्इाकेट लगाएका मान्छेहरू त्यो भूकम्पले आक्रान्त वस्तीमा शान्त मुद्रामा थिए । वस्तीका अरूहरू आतङ्कित मुद्रामा उनीहरूलाई हेरिरहेका थिए ।
Read more about अवशेष वस्ती/ किशोर पहाडी
सर्प उद्योग/ पूर्ण मुनंकर्मी
एकजना सपेरा गाउँमा चटक देखाउन आएको थियो । उसले विभिन्न जातका थरिथरिका सर्पहरूलाई नचाउँदै गाउँलेहरूलाई मनोरन्जन गराइरहेको थियो । सर्पमध्ये सबै भन्दा राम्रो देखिने गोमनको महत्व र आर्थिक तथा औषधिय गुण बारे पनि जानकारी दिएको थियो ।
Read more about सर्प उद्योग/ पूर्ण मुनंकर्मी
मृत्यु पर्खिरहेछ/ राशि पाण्डे
सम्पूर्ण व्यथालाई अाँखामा समेटेर प्रसववेदनाले भैँसी उठबस गरिरहेको छ । केटाकेटीहरू भैँसीलाई चारैतिरबाट घेरेर रमिता हेरिरहेका छन् । घरभरि खुसी छाएको छ ।
के ब्याउने हो ? घरधनीबुढी कुँडो पकाउँदै गुनिरहेकी छिन् । पाडो पाई भने त के काम ? मासु खान हुन्न, हलो जोत्न हुन्न । बित्थामा आधा दुध त त्यसैलाई पोस्दै ठिक हुन्छ । फेरि तिन, चार वर्ष पाल्यो, देवीलाई बलि चढाउनेहरूले कति नै दिइहाल्छन् र ? तिन, चार सय त हो नि ? दुध नै हजार–पन्ध्र्र्र सयको खाइदिन्छ ..... तराईमा त थुप्रै पैसा दिन्छ रे पाडाको पनि ? के गर्नु त्यहाँ दिएर ? लैजान सकिने होइन ?
Read more about मृत्यु पर्खिरहेछ/ राशि पाण्डे